University weExeter - Dzidzo iri Great Britain, England
University weExeter Details
guta : Exeter
Acronym : U pamusoro E
inotangwa : 1922
Musakanganwa kuti kurukura University weExeter
Kunyoresa pa University weExeter
The University weExeter anoratidzwa pamusoro muUK wacho 10 kare 4 makore (The Times uye The Sunday Times Good University Guide) uye pokutanga pamusoro 100 mumayunivhesiti munyika maererano Times Higher Educationdzakawanda kuera. The CWTS Leiden chinzvimbo 2015 anoisa isu 34th munyika nokuda dzokuita pamwe chesayenzi uye zvazvinoita. Tiri nhengo zvakakurumbira Russell Group kutsvakurudza nyanyisa mumayunivhesiti.
Unhu dzidzo uye ruzivo akagamuchira paUniversity weExeter zvinoreva isu chinzvimbo 8th muna UK iri ichangoburwaTimes Higher Education Student Experience Survey.
Maererano ichangobva Yepamusoro Education Statistics Agency Data, isu vanoiswa 9th ose UK mumayunivhesiti nokuda madambu: 84 muzana vatinodzidza navo kudzidza pamwe zvimwe First kana 2:1.
Vadzidzi vedu vanoda yakawanda isu uye isu kwavari - tinovavarira kuti kudzidzisa kwedu kurudziro uye kwako nokudzidza aakatipa.
tsvimbo yedu zvedzidzo kupfuura lecturers achidzidzisa kubva mumabhuku. Ivo ita kutungamirira tsvakurudzo yako nyaya nharaunda. Makumi mapfumbamwe nevasere muzana kutsvakurudza kwedu yavose sezvavakatarirwa sezvo nyika-kutungamirira kana dzemunyika kuzivikanwa (Research Excellence Pakuumbwa 2014). Iwe vachadzidziswa nyanzvi uye chikamu tsika kuti rakafuridzirwa tsvakurudzo - iwe ichakurukura pfungwa chaizvo azvino mune ekudzidzisa uye Tutorials uye anogona kuva nhengo inoshingaira ine tsvakurudzo chikwata.
Pana Exeter vadzidzi vari kuisa pamwoyo gadziriro uye zvirangaridzo unyanzvi uye zvivako inzwi zvavanofunga uye anoda. High kwevari chivimbo vari paakapiwa vari vadzidzi kuumba yavo ruzivo yunivhesiti uye migumisiro zviri zvikuru mubayiro.
The Students 'chikwata iripo kuti zviite uye kutungamirira ichi, uye zvakanaka ukama tine pamwechete University anobvumira nemazano kuchinja kuuya zviitike.
tsika iyi yakasiyana nedzimwe iri runonyanya runowanikwa rinoitwa redu vakazvitsaurira Subject Reps uye Change Agents vanoronga, asi mudzidzi wose anokurudzirwa kuti inofambiswa uye kuvavamba munzanga zvakavatenderedza. pano, munhu wose anokokwa kuti chikamu kwenzanga ichi, uye nzira kwevadzidzi nevashandi zvinoungana zviitiko zvakafanana nedzidziso mibayiro, semuyenzaniso, inopfupikisa izvi. Zvaakanga zvokusarudzwa vari zviuru yavo mudonzvo vanoda kupembera, vadzidzi vari ipapo vakakumbira kubatana tsvimbo panguva nakisisa mibayiro mhemberero, kuona vanhu vanobva zvose pamusoro kembasi uye kunyange mamwe kuuya pamwe chete kubvuma basa rakaoma.
Tinewo naHama zano yokuvirira, nevadzidzi dzinotevera mukuru nhengo tsvimbo nekuti zuva uye mudonzvo wölf ichi kuburikidza yokuvirira navo kudzoka. Ndakatora mugove ichi gore rakapera, kupinda misangano nemutevedzi Vice-chanzera for Education, Janice Kay, uyo akabva akasvika hurukuro yangu uye ekudzidzisa gare gare kuti vhiki. Hapana kukamukana pano, tiri tose kushanda pamwe chete uye vose anonzwa akasununguka.
Students 'chikwata Vice President Academic Affairs
College of Life uye Environmental Sciences
Environment kuenderera Institute
Sport uye Health Sciences
College of Engineering, Masvomhu Nokusangana Sciences
Mining uye zvicherwa Engineering
College of Social Sciences uye International Studies
Arab uye Islamic Studies
wemagariro evanhu, Philosophy uye Anthropology
Strategy uye Security Institute
Art History uye Kutarisana Culture
Classics uye Ancient History
Theology uye Religion
Institute of anorapa achishandisa mitemo & Clinical Science
Kupemberera basa redzidzo uye esayenzi Prince Albert, uye rakafuridzirwa Great Exhibition pamusoro 1851, Exeter School of Art mu 1855 uye Exeter School of Science mu 1863 vakanga inotangwa. mu 1868, ari Schools of Art uye Science kutamiswa Royal Albert Memorial Museum iri Queen Street, Exeter uye, rubatsiro kubva University of Cambridge, akava Exeter Technical uye University Extension College mu 1893.
mu 1900 ayo yepamutemo rokuremekedza aichinjwa kuna Royal Albert Memorial College uye kukoreji vakatamira Bradninch Nzvimbo Gandy Street. The koreji zvakare kunzi kune University College of South West England mu 1922 mushure koreji yakaitwa chikamu pasi theCompanies Act uye raisanganisira pandandanda nemasangano kodzera kugamuchira mari kubva ipapo University Grants Committee. Sezvo akanga tsika itsva kuyunivhesiti masangano kuEngland muna navapfumbamwe uye emakore okutanga maviri, yekoreji akagadzirira vadzidzi kuti kwokunze madhigirii paUniversity of London.
Alderman W H Reed, aimbova meya weExeter, zvapa Streatham Hall pamusoro Streatham Estate itsva University College mu 1922. Streatham Hall akanga apiwa zita rokuti kuna Reed Hall namarudzi kumupi. Panguva imwe, mukuru wechikoro University College rokutanga, Papera Sir Hector Hetherington, akanyengetedza Council of College kutenga chikuru chikamu Streatham Estate. A anononoka chipe Streatham Estate kubva peguta kwakaitika pamusoro nguva. Chivako chitsva rokutanga kuvakwa Streatham Estate aiva Washington Singer chivakwa; nheyo ibwe wakaradzikwa noMuchinda Wales (Papera King Edward VIII), ipapo President of University College of South West England. Chivako yakavhurwa 1931. The rokutanga chinangwa-akavaka dzimba dzokugara, Mardon Hall, wakazaruka 1933. The zvedzidzo chivakwa wechipiri wemunda kwaiva Roborough Library ainzi ari kuziva kufarira kubatwa kukura kukoreji kubudikidza wokutanga Ishe Roborough, mumwe yayo mangwanani vabatsiri. Roborough Library rakapera kumativi 1939.
The University College of South West England akava University weExeter uye akagamuchira ayo Royal Charter mu 1955, chaizvo mumwe zana makore paumbwe yepakutanga Exeter School of Art. Queen Elizabeth II akapa Charter kuyunivhesiti iri kushanyira Streatham rakatevera gore.
The yunivhesiti huchibva nguva yakawanda kuwedzera muna Kuma1960. pakati 1963 uye 1968, imwe nguva apo nhamba vadzidzi Exeter anenge nekaviri, Zvivako zvikuru hapana zvisingasviki gumi apera pamusoro Streatham kuchamuka uyewo dzimba dzokugara nokuda kumativi 1,000 vadzidzi. Ava vaisanganisira mudzimba nokuti Chemistry uye Physics madhipatimendi, ari Newman, Dhishi uye Engineering Buildings uye Streatham Court. Dzamambokadzi Building akanga akazarurwa nokuda Arts kodzero 1959 uye Amory Building, Housing Mutemo Social Sciences, atevera 1974. Mumakumi emakore akatevera maviri, wandei mubhizimisi yakaitwa kuva itsva kuzvidzora Eenhede pokugara kuti vadzidzi.
Zvipo kubva Gulf States akaita kuti zvibvire kuti kuvaka itsva raibhurari yunivhesiti iri 1983 uye munguva pfupi ichangopfuura vakarega nokuda chisikwa rutsva Institute of Arab uye Islamic Studies. A mberi chikuru mupiro zvakaita okuguma Xfi Centre Finance uye Investment. kubva 2009, chinokosha humwe mubhizimisi yakaitwa kupinda itsva mudzidzi pokugara, zvivako zvitsva mu The Business School, uye Forum: kuwedzera hutsva nechepakati Streatham kembasi.
mu 1838, ari Exeter Diocesan Board of Education akatsunga kuwana sangano kuti dzidzo nokudzidziswa schoolmasters, wokutanga kwakadaro kutanga England. Semagumo, Papera gore, ari Exeter Diocesan Training College akasikwa Cathedral Close, Exeter ari aimbova mumba Archdeacon pakati Totnes, yakabatana Exeter Cathedral. The Principal chokutanga akagadzwa uye koreji yakavhurwa 1840.
kuwedzera vakatevera, uye 1853, John Hayward (uyo akazova nebasa pamasikiro Royal Albert Memorial Museum) Akapiwa basa vagoronga chinangwa akavaka kwakavakirwa nokuda kukoreji musi Heavitree Road. chivako, kazhinji yakavakwa wachena nelimestone Torbaywith Bath Stone dressings, rakapedzwa kwematsutso zvinotevera gore. On 18 Gumiguru 1854, pashure basa iri Exeter Cathedral, imwe mhemberero yokutanga nokuda zvivako zvitsva yakaitwa. Kubva musi uyu 1854 (St Luke yeZuva), yekoreji akanga asati agadzwa kuzivikanwa St Luke raMwari. yaunodya The koreji muna 1854 aiva 40 vadzidzi.
In zvakafanana, panguva Royal Albert Memorial College, chirongwa mukati Arts uye Sciences dhipatimendi mu 1912 pakupedzisira zvakatungamirira kuti paumbwe imwe Institute of Education (izvo St Luke kwakaita College aiva constituent nhengo) uye vakaparadzana dhipatimendi Extra Mural Studies nekuti zvakafunga mudzidzisi kudzidzisa. Exeter Diocesan Training College akanga pamutemo zita kuna St Luke raMwari College weExeter muna 1930 uye akava co-dzidzo munyika 1966.
mu 1978, St Luke kwaiita College Exeter akanga rapinzwa University weExeter. A fakaroti akasikwa pakusanganisirawo yunivhesiti Institute of Education uye St Luke kuti College Exeter rive idzva School of Education.
The Peninsula Medical School yakatangwa 2000 pavanoparidza paYunivhesiti Plymouth uye National Health Service, inobva pana St Luke uye Royal Devon uye Exeter Hospital. The School of Dentistry yakavhurwa 2007 uye, pamwechete Peninsula Medical School, akasika Peninsula College of Medicine uye Dentistry. St Luke kuti kembasi ndiyo nzvimbo huru nokuda University weExeter Medical School, iyo vakagamuchira vadzidzi yaro yokutanga 2013.
Panguva namasere uye namapfumbamwe emakore, Cornwall yaiva pakati rinonyatsooneka metalliferous migodhi kumatunhu munyika. Camborne School of Mines rakaumbwa 1888 kuti zvinodiwa ichi zvomunharaunda indasitiri.
Camborne School of Mines yaiva pakati Camborne kwerinenge remakore asi, anotevera chikuru mubhizimisi pedyo mugodhi indasitiri uye vamwe dzakawanda, vakanogara mune 1975 kune zvivako chinangwa-akavaka pakati-nzira pakati Camborne uye Redruth. Rinokosha kuwedzera uye diversification hwokudzidzisa uye tsvakurudzo gadziriro chakaitika panguva 1980s uye mangwanani kuma1990, kusanganisira kukura Rokutenderwa uye vakadzidzisa dhigirii dhigirii zvirongwa zviri zvemaumbirwo, kwezvakatipoteredza sayenzi panenge pachivakwa. mu 1993, Camborne School of Mines akanga rapinzwa University weExeter.
Kuita maererano University weExeter nevamwe kuti akudziridze urongwa dzidzo yepamusoro muna Cornwall kwakaguma kukabatanidzwa Africa muna Cornwall (kuen) kutanga 1999. Sezvo chikamu urongwa ichi, Penryn, chete kunze Falmouth, akava nzvimbo Penryn ritenderane, chivako nomudzimai Falmouth University. Camborne School of Mines kutamiswa Penryn munguva 2004 kana itsva Cornwall kembasi yunivhesiti yakavhura.
Unoda kurukura University weExeter ? chero mubvunzo, Mashoko kana wongororo
University weExeter musi Map
Photos: University weExeter pamutemo Facebook
University weExeter wongororo
Join kukurukura pamusoro University weExeter.